Noma yimuphi ithuluzi udinga ukwazi ukuthi ukusebenzisa kahle futhi silondoloze ke ukuze bandise nokuphila isevisi eside ngangokunokwenzeka. Futhi Chainsaw iyathinteka. Lokhu imishini isici esiyinhloko edinga ukunakekela yiyona wesifunda. Isimo sakhe sithinta nokusebenza Chainsaw. Ngakho-ke, le nto kumele igcinwe ukuze okuhle. usikhalele elola yokusaha ngezandla inquma ukusebenza inkonzo impilo ithuluzi iyonke.
Hlaziya isimo wesifunda izici ezilandelayo:
Ukwanda isikhathi esichithwa kubulawa imisebenzi kanye nemizamo supply.
Uma iketanga "kuholela" bebheke okwabonwa.
Ngu chip: lapho abukhali isaha chips ukuthola ukuma square efanayo, futhi uma kukhona blunt sawdust esihle njengoba by ezihluthulelwe manual, nothuli.
Lezi izimpawu zibonisa ukuthi kukhona blunting amazinyo, Ngakho-ke, kudingeka imimese yokusaha ngezandla zakho. Le nqubo ngeke yisixakaxaka.
indlela manual. It wenziwa ngenhloso ububanzi efanelekayo lefayela (cylindrical). Ukuze isandla lwenziwe qualitatively elola Chainsaw ngamaketanga, kumele ube namanye amathuluzi. Okungukuthi, kubalulekile ukuba abe round futhi amafayela flat, iphethini kuhlanganiswe (ngayinye Chainsaw ngabanye). Ukuze kube lula futhi kalula ukuhamba komsebenzi badinga Vise.
Enye indlela ukusebenzisa umshini ukugaya. Iza manual kagesi. Lezi amadivayisi kahle zokuhamba imvelo ekhaya, kodwa futhi kakhulu lula ukuhamba komsebenzi. Ukuze wenze lokhu, udinga kuphela ukuthenga umshini ukugaya izifunda. Okwamanje, kunezinhlobo eziningi ezihlukahlukene mikhiqizo ezitolo ezikhethekile. Kulokhu, izindleko zizoba elola yokusaha umshini mathupha. Noma kunjalo, konke kuncike izifiso zomuntu.
Isimiso yochungechunge isenzo
Ngaphambi kokuthi uqale imimese, kufanele uqonde isimiso wokusebenza kwalo mkhiqizo. Siqukethe limiter uchungechunge nokusikwa amazinyo. Ziyashiyana ukuphakama. Ukuphuca isaha izinyo ithatha njengoba shavings Planer, ukushuba incike limiter ukuphakama. Kubalulekile ukwazi. Ezahlukene ukuphakama limiter nokusikwa namazinyo kufanele kube 0.5-0.8 mm. Le nkomba alinganise sokungena kanye nempumelelo umsebenzi sawing ukhuni ukujula.
Incazelo indlela manual
Kulokhu, enze izinyathelo ezilandelayo:
A ezihluthulelwe isondo uchungechunge kuvikelwe endaweni Vise.
Qala inqubo nge ukusika amazinyo. Uma usuqedile elola yokusaha ngezandla zabo, kufanele ngokunembile kahle mayelana izinyo round ifayela. Unqenqema umphumela ithuluzi wathi okufanele abe ngaphezu ubuso phezulu isici wathi ezenziwayo ukuze 1/5 ubukhulu.
Ifayela efakwe izinyo ngu emigqeni eseduzane, okungukuthi, esekelwe elidlula nokujula geji.
Ngemva kwalokho, yenza ukunyakaza 2-3 abushelelezi ngokwayo, akuyona baphokophelele ifayela. Ngakho lola uhlangothi bese enye.
Kuyadingeka ngoba elola ukuvula ifayela bafake lawo bekungelegolide ngisho.
Isibalo ukunyakaza by ithuluzi clamping force kumelwe wonke amazinyo okufanayo. Lolu chungechunge luyonikeza ubude iyunifomu zonke lezi zinto komkhiqizo. Uma amazinyo kukhona ukungalingani ubude, inkambo wesifunda emsebenzini kuyoba okungafanele. Futhi kungase zimiswe ufa. I-engeli phakathi visor futhi ohlangothini izinyo kufanele kube 90 °.
Ngemva amazinyo ukusika icijiwe obuphelele limiters. Le nqubo ibizwa futhi kwenziwe nge ifayela.
Hand elola yokusaha kuphela owazenza isifanekiso. Kungenjalo iketango infeed ukujula iyokwanda kuyoba vibration nokunemba eziphukile. Okubekwe iphethini ukuze ngesivalo kudlalwa embobeni. Le ngxenye projecting siqede ifayela flat. Ukuze ukusebenza okhunini oluqinile iphethini esikhulu isikhundla HARD noma "H", futhi ezithambile - SOFT noma «S».
Le divayisi uyawuthanda funa eside. Lapho bafake esindayo futhi blunting isaha amazinyo, ikakhulukazi uma nabo phansi, iketango kudinga elola uchungechunge wabona umshini mathupha. It ingalungiswa noma yeselula, efakwe ngqo ebhasini. Ngu design kunjani Luchkova wabona kuphela round ifayela. umshini okulungisekayo ngoba iningi ezincane izinyo namasaha. Ukulungiswa inikeza obuphelele alinganayo zonke izakhi ezenziwayo. Ukulola limiter washintsha kwifayela flat.
Ukulola yokusaha ngezandla zenu engenziwa izikhathi eziningana phakathi umsebenzi. Lokhu kuzovimbela ziwohloke abalulekile emazinyweni inciphise ukugaywa. Okubaluleke kakhulu, ukusebenza lizophakama.
"Beretta" (gas okokubilisa): imfundo, ukubuyekezwa
I-rake yisidalwa esitholakala eduze kwaseBrobidbidhan. Umuntu-wakhe
Poland Imboni: incazelo emfushane nezimboni ukhiye
Blepharoplasty Transconjunctival: incazelo, izinkomba, yezinkinga Izibuyekezo